Kusarudza Zvifambiso Mawiricheya vs. Manual | Karman® TV-10B
musha / Chinyorwa Wiricheya / Kutakura Mawiricheya
Chero Chigaro Saizi16 "Chigaro17 "Chigaro18 "Chigaro19 "Chigaro20 "Chigaro22 "Chigaro
Chero Chero Mushandisi Kurema250 lbs kana zvishoma250 makirogiramu - 300 lbs400 lbs kana zvimwe
Kutenga Yekutakura Mawiricheya vs. Manual Propel Models
Yekutakura mawiricheya kana shamwari dzekubatana vanobatana nemawiricheya uko chinangwa chiri chekuti shamwari isundidzire mushandisi. Vazhinji vevatakuri vedu vane zororo-rekuzorora regumbo, zvigaro zvemaoko zvakagadziriswa, uye mapaneru epadivi. Panzvimbo pemavhiri eakajairwa 'makuru kumashure - madiki epamberi' akajairika emawiricheya mazhinji, macheya ekufamba mashoma Iva nemavhiri mana madiki anopa nyore nyore maneja manejaverability.
Mangani mafambiro ekufamba chaizvo KUKUNDA KUEDZA zvavo kutakura mawiricheya? Hapana imwe kambani inoita kunze kwedu. Isu tinogadza iyo bar yeiyo Yakakwira mhando uye Chengetedzo. Dzidza zvakawanda nezve S-ERGO nhasi nezvose KUKOPA KUEDZWA S-Rakaumbwa zvigaro Mafuremu. Uyezve dzidza zvakawanda nezve akawanda emhando mamodheru ane bvisika muchina unowoneka uye unomesa makushoni akagadzirwa ne AEIGIS® kubata anti-microbial yakavharwa zvigaro sisitimu.
Transporter cheya iwiriricheya inofambidzana uko chinangwa chiri chekuti shamwari isundidzire mushandisi.
Mazhinji emacheya ari muchikamu ichi ane tsoka-inofamba-gumbo yekuzorora.
Mazhinji eedu shamwari cheya ane zvigaro zvakagadzika nemaoko epaneru.
Yedu shamwari zvigaro kazhinji inorema pakati pe18 - 29 lbs.
Mazhinji emacheya edu ekufamba akagadzirwa neakareba akareruka aruminiyamu.
Kufambisa kwekufambisa kunowanikwa mune yakajairwa 18 ″ / 19 ″ uye mazhinji ari zvakare ari akatetepa 16 ″ / 17 ″ chigaro upamhi.
Chiedza Chekufamba Chairs
Nezve rubatsiro rwekufamba mukutenderera kunze kwekugara kwako kana kushanyira hofisi yechiremba, tarisa mutsara wedu wezvigaro zvekufambisa. Izvi mavhiripu anowanzo kureruka kwekutakura zviri nyore, uye mazhinji mamodheru akapeta pasi kuitira kuchengetedza uye nyore kushandisa.
Yedu sarudzo yemacheya anotakurika inopa maficha uye sarudzo izvo vamwe vagadziri vasingaite. Iwe unogona kusarudza yako wiricheya ine maficha senge shamwari-yakavhurika mabhureki emaoko, anti-tippers, uye zvimwe zvishongedzo.
Kuchengetedza uye Kufamba
Kune zvako zvimwe zvinodiwa zvekufambisa, tarisa kusarudzwa kwedu kwemidziyo yekufamba, Accessories uye zvigadzirwa zvekuchengetedza zvekugezera. Unogona kuwana mawiricheya ane akawanda akasiyana maficha emhando dzakasiyana dzemuviri uye saizi. Makuseni yakagadzirwa negel, furo kana ne Aegis yakarapwa machira inogona kukubatsira kuti ugare wakasununguka zuva rese. Zvimwe zvishongedzo zvinosanganisira mabhandi echigaro, musoro unozorora uye takurai homwe.
Wiricheya Zvimiro, Zvikamu, uye Ruvara Sarudzo
Macheya ane mavhiri anoonekwa seanotakura ane akasiyana misiyano yezvinhu, zvinhu, uye sarudzo dzemavara. Unogona kuvawana vaine zvigaro zvemberi, zvigaro zvehurefu, uye maoko akasarudzika, flip back armrests, padded maoko, uye bvisika izere kana tafura kureba armrests.
Zvese zviripo zvakatsenhama zvigaro zvekufambisa zvinouya nemavhiri mana uye muchinjiko wekusunga unotungamira kuchigaro checheya. Vanogona kuuya mumakirasi akasiyana ehuremu anosanganisira 10 kusvika 20 lbs., 20 kusvika 30 lbs., Uye anodarika makumi matatu emapaunzi. Chishoma icho chigaro chinorema, zvirinani icho chiri icho chinangwa chayo chinangwa chekufamba nyore.
Zvichienderana nehuremu hwemunhu anogona kushandisa, pane makirogiramu ehuremu anoenderana nemhando dzakasiyana dzerudzi rwemuviri. Unogona kuvawana mumazana maviri kusvika mazana matatu., Nzira yese kusvika pamazana mashanu. kurema chinzvimbo. Sarudzo dzemavara dzinogona kusiyana uye dzinogona kusanganisira furemu ruvara uye upholstery ruvara rwechikamu chikuru. Isu tinopa dema, sirivheri, bhuruu, uye mutsvuku mafuremu, upholstery inogona kusiyana kubva kune nhema kusvika pasirivheri uye musanganiswa wezvose zvakare.
Mhedzisiro iyi yakabatsira here? Tizivise.
Kusarudza chigaro chekufamba idanho hombe, uye iwe unoda kuve nechokwadi kuti iwe uchawana zvese zvakanakira cheya cheya pasina chero matambudziko. Takagadzira zvigaro zvedu kuti zvive zvishoma saka zviri nyore kushandisa pakufamba. Iwo zvakare akapetwa kuti zvive nyore kutakura mumotokari uye kuchengetedza. Sachigaro wekufamba zvakare yakakosha yekufambisa rubatsiro kune vanhu vasingawanzoda mawiricheya Ivo anofanirwa kusundidzirwa nenhengo yemhuri kana muchengeti, sezvo mavhiri avo madiki anoita kuti zvisakwanise kuti mushandisi azvisimudzire.
Vashandisi vezvifambiso zvekufamba vanogona kuwana mwenje wekufamba newiricheya inzira yakasununguka kana uchienda kuzviitiko zvakareba senge michato kana kana iwe uri panze.
Kuti uwane rumwe ruzivo rwekuti ungafambise sei wiricheya mumotokari, ndapota ongorora zvinyorwa zvekudzivirira wiricheya.
MACHITO - Chigadzirwa chega chega Chekumisikidza Peji chine ruzivo rwese rwakanangana nechigadzirwa (semuenzaniso HCPCS Makodhi, Zvidimbu, Zvinyorwa, UPC, nezvimwewo). Kana iwe uchida kuona chese chigadzirwa chakanyorwa nema specs uye ruzivo, ndapota shanyira yedu Zviwanikwa Landing peji nekudzvanya HERE. Buda Macheya emota. Tarisa yedu Kumhara Peji Dhairekitori.
Mibvunzo nemhinduro zvine chekuita nemacheya mavhiri neBus neRail Service
Chigaro cheMedare cheMavhiri uye Scooter Batsirwa
Hunhu Hwetsika uye Kubvumidzwa Zvinodikanwa kune Ultra Zvisingaremi Manual Chair
Zvifambiso zvemaWiricheya zviri nani pane Manual Mawiricheya?
Kana iwe uchitsvaga yekutakura mawiricheya, iwe unogona kunge wakambouya kumubvunzo webhuku rinofambiswa newiricheya rinokodzera iwe. Zvinoenderana. Saka iwe waizochengetedza kubva pa5-10 lbs zvirinani kune mavhiri madiki, zvisinei iwe unokwanisa zvakare kusunungura mafambiro ekukwanisa kuzvigadzirisa kana kuzvisimudzira pachezvako pazvinenge zvichidikanwa. Mazhinji anogadzira aigona kushandisa furemu imwechete vobva vangoisa padiki kana hombe vhiri. Isu tinonyatso dhizaina zvigaro zvedu uye iwe uchaona mutsauko. KuKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru emawichecha emawoko ekusarudza kubva. Kazhinji, kana iwe uchikwanisa kuzvimhanyisa pawiricheya, iwe uchazoda iyo isina kureruka yakanyatsogadzikana wiricheya iripo. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nehuremu hwechigadzirwa uye bhajeti. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako: